के हो क्लच ? कसरी गर्ने क्लचको सुरक्षा ? – ramechhapkhabar.com
क्लच सवारी साधनको एक महत्वपूर्ण पार्ट्स हो । यसले सावधानिपूर्वक इन्जिनले उत्पादन गरेको पावरलाई ड्राइभट्रेनमा पुर्याउने काम गर्छ । साथै क्लचले गियर डिस्कको दातीलाई असर नपुग्ने गरी सजिलै गियर फेरबदल गर्न पनि मद्दत गर्छ । हामीले क्लचको प्रयोगमा ध्यान पुर्याउने हो भने ३०–४० हजार किमी सम्म पनि क्लच फेर्नुपर्ने समस्या आउँदैन ।
– बाइक न्युट्रलमा मात्रै स्टार्ट गर्ने गरौँ । गियरमा बाइक स्टार्ट गर्दा हामी केही धक्का महसुस गर्छौ जसको मतलब क्लचमा बाधा पुग्छ । – बाइकमा पिकअप लिदा एक्सिलेरेटर धेरै नदबाऔं । यसले पनि क्लचको आयु घटाउछ । – ट्राफिक जाम अथवा अन्य कुनै अवस्थामा बाइक स्टार्टमै रोकिराख्नु परेमा बाइक न्युट्रलमा राखौँ ।
– आधिकारिक र दक्ष मेकानिकद्वारा क्लच मिलाऔँ । – स्टन्टको क्रममा टायर बर्न आउट तथा ह्विली गर्नाले क्लच छिटो जल्छ । – कम्पनीद्वारा सिफारिस गरिएको इन्जिन आयल प्रयोग गरौँ ।
काठमाडौं – निसानको कम्प्याक्ट एसयूभी सेगमेन्टको गाडी निसान किक्स आज नेपाली बजारका लागि लन्च गरिने भएको छ । नेपालमा निसान गाडीको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले एक विशेष कार्यक्रमका साथ निसान किक्स लन्च गर्ने योजना बनाएको छ । निसान किक्सको बेस भेरिएन्टको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) ४८ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । तर पनि वास्तविक मूल्य लन्चिङकै समयमा सार्वजनिक गरिने कम्पनी स्रोतले बताएको छ ।
पायोनियर मोटोकर्पका अनुसार पेट्रोल र डिजेल दुवै भेरिएन्टको कार नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ । सार्प, अपराइट स्टाइलिङ र एजी लाइनका कारण यसको लुक निकै नै राम्रो देखिएको छ । यसमा १७ इनचको एलोई ह्विल र २१० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ ।
निसान किक्स डिजाइनको मामिलामा निकै नै राम्रो छ भने यसको सिटलाई पनि प्रशस्तै सुविधाजनक बनाइएको छ । यसमा १.५ लिटरको पेट्रोल र डिजेल इन्जिन छ । पेट्रोल इन्जिनले १०६ बीएचपी पावर र १४२ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । त्यसैगरी डिजेल इन्जिनले ११० बीएचपी पावर र २४० एनएम टर्क प्रदान गर्छ ।
यसमा ठूलो साइजको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिष्टम छ, जसले एन्ड्रोइड अटो वा एप्पल कारप्ले सपोर्ट गर्छ । सुरक्षाका लागि यसमा चारवटा एयरब्याग, ईबीडी सहित एयरब्याग, ब्रेक असिष्ट, हिल स्टार्ट असिष्ट र फर्स्ट इन सेगमेन्ट ३६० डिग्री क्यामेरा छ । निसान किक्समा अटो हेडल्याम्प्स र अटो वाइपर्स जस्ता फिचर उपलब्ध छन् । यसले टाटा नेक्सन, हुन्डाई क्रेटा र रेनो क्याप्चर जस्ता गाडीलाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ ।